अदालतको मानहानी गर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई कारबाही होस्, डा.केसी | Ekhabar Nepal
डा. गाविन्द केसीले आफूले नभइ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अदालतको मानहानी गरेको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार आदलतको मानहानी गरेको मुद्दामा बयान दिन सर्वोच्च अदातलमा उपस्थित गराइएका डा. केसीले आफूले गलत कुराको विरोधमात्रै गरेको भन्दै त्यसले अदालतको मानहानी नहुने बयान दिएका हुन्।
उनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले दुईवटा नागरिकता लिएको, उमेर सच्याएको, भ्रटचारीलाई उन्मुक्ति दिएको लगायतक आरोप लगाउँदै छानविन गरी कारबाही गर्न माग समेत गरेका छन्।
डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले अदालतको आस्था, गरिमा र स्वाधीनतालाई चुनौती दिएका कारण उनीबाट अदालतमो मानहानी भएको बताएका छन्। उनले आफूमाथि लागाएका आरोपहरु निराधार रहेको भन्दै पराजुलीको विषयमा छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि लगाएका आरोपहरु
३, गोपाल पराजुलीले लोकमानसिंह कार्कीलाई गलत कानुनी आधारमा सफाइ मात्र दिएनन्, बरु सो सफाइ दिएपछि उनका नातेदार (भतिज) लाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कानुनी सल्लाहकार बनाइएको छ। यसरी मुद्दामा सफाइ दिने र आफ्ना नातेदारलाई जागिर खुवाउने कामले न्यायिक गरिमा र न्यायिक आस्थालाई किनबेच गरेको देखिन्छ। यसविषयमा यथार्थ छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याइयोस्। निज गोपाल पराजुलीमाथि पद र ओहदाको दुरुपयोग गरेकोमा कारबाही होस्।
४, निज गोपाल पराजुलीले एसएलसी पास गरेका छन कि छैनन भन्ने बारेमा विवाद छ। सो सम्बन्धमा विगतमा प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीबाट भएको आदेश र मिसिललाई पनि हेरी संलग्न गरिपाऊँ। निज पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको जाँच गरिपाऊँ। न्यायाधीश हुनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र नभएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन सक्दछ? के यो राज्य र अदालतजस्तो संस्थालाई गुमराहमा राख्ने अपराधिक कार्य होइन?
६, जग्गा प्लटिङ व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थि तगर्न सरकारले लिएको नीति र निर्णय उल्टाइ भू माफियाको हित हुनेगरी जगदीश आचार्यको मुद्दामा एकतर्फि रुपमा निज गोपाल पराजुलीले जुन आदेश दिए त्यसबाट न्याय बेचेको देखिँदैन र? यस विषयमा छानविन गरिपाऊँ।
७, क्यासिनो चलाएबापत होटलले राजस्व तिर्नु नपर्ने गरी जो फैसला निज गोपाल पराजुलीले गरेका छन् त्यसबाट न्याय मरेको छ। रज्यले राजस्व गुमाएको छ। न्याय मार्ने व्यक्तिले कसरी न्यायिक स्वाधीनताको जगेर्ना गर्न सक्दछ?
८, निज गोपाल पराजुलीले प्रधानन्यायाधीश भएपछि भएका विभिन्न आदेश र फोसला मध्ये चुणामणि शर्माको मुद्दा, गोपाल खड्काको मुद्दा र एनसेलको मुद्दाले भ्रष्टचारलाई पश्रय पुग्नुका साथै ६० अर्ब बराबरको राजस्व एनसेलले तिर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। के यस्ता क्रियाकलापले कानुनको शासनलाई उपहास गरेका छैनन्? उक्त सम्पूर्ण मुद्दामा भएका आदेशबाट न्याय मरेको छ छैन न्यायिक निरोपण एवं छानविन गरियोस्।
१०, शुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाइएको राति १०ः३० बजे निज गोपाल पराजुलीले आफूलाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा पदबहाली गरेका छन्। यो कुन कानुन र मर्यादाले मिल्छ? यस किसिमको गैर कानुनी काम गर्ने व्यक्तिबाट न्यायपालिकाको गरिमा उच्च हुनै सक्दैन। त्यसैले उनको राजीनामा अत्यन्त जायज छ।
११, जताजता गोपाल पराजुली उतैउतै मेडिकल कलेजका मुद्दा शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले लेखेको समचार उपर कान्तिपुर दैनिकमाथि लगाइएको अपहेलना मुद्दामा कान्तिपुर दैनिकले सफाइ पाएको छ। त्यसको अर्थ हो कन्तिपुरको उक्त समचार न्यायिक रुपमै पुष्टि भएको छ। निम्नलिखत मुद्दाहरुमा निज गोपाल पराजुलीले गरेका निर्णय र आदेशले सोही पुष्टि गर्दछ। यसरी न्यायिक रुपमै निजको चरित्र स्पष्ट भैसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा आसिन हुन सुहाउँदैन।